Azonao atao ve ny milaza amiko ny toro-hevitra lehibe indrindra SEO?
Mampalahelo fa tsy misy vahaolana iraisam-pirenena na SEO ny teny fototra momba ny SEO mba hahatonga ny votoaty ho tsara sy tsy ho ela. Raha ny marina, manaraka ny fanavaozana farany amin'ny algorithm of Google, dia misy ny fiasa manokana amin'ny fikarohana teny fototra izay manahaka ny fampifanarahana ireo lamina navaozina ho an'ny fanombanana isa indray. Ireto misy soso-kevitra dimy manan-danja indrindra SEO mba hitazonana ny votoatinao ho tsara sy haingana hatrany.
Mahaiza mandanjalanja eo amin'ny lavarangana tenimiafina
Nalaina amin'ny ankapobeny, ny teny fanalahidy dia azo ampiasaina ho tsotra sy fohy (e. h. , teny fanalahidy tsara indrindra) na ho an'ny fehezan-teny lava lava mitarika telo na mihoatra miaraka (e - pc temperature meter. h. , ny teny fanalahidy tsara indrindra ho an'ny blaogiko SEO). Eto aho dia tokony hahita fahasalamana ara-pahasalamana amin'ny fampiasana ireo karazan-teny fototra manan-danja. Ireto misy soso-kevitra ho anao. Voalohany indrindra, ny lohateny (teny fototra tokana) dia matetika miatrika fifaninanana tena goavana. Raha heverina ny teny fanalahidy lava be, dia misy fifaninanana tsy misy dikany ny momba azy ireo, kanefa dia ampidirina ao anaty fikarohana tsy dia matetika loatra. Izany no mahatonga ny vahaolana tsara indrindra hahatakatra tsara ny mpihaino anao ary avy eo mampiasa ny teny fanalahidy farany amin'ny lava izay hampiasaina azo antoka.
Ny toetra amam-pahalalany dia mbola olana mafonja
Na dia mety hiteny aza ireo toro-hevitra SEO ireo soso-kevitry ny SEO, aza manadino ny haavon'ny tanjona ambony indrindra. Ny fanaovana ny votoatinao iferena amin'ny teny fanalahidy, ny ankamaroan'ny asa soratanao dia manara-maso na tsy mahafa-po. Vokatr'izany, ny votoatin'ny kalitao dia mety ho mora vakiana, noho izany dia manimba ny kalitao anatiny. Adinoy fa tamin'ny fotoana taloha, raha ny Google ranking indrindra dia notarihan'ny lojika ara-teknolojian'ny SEO. Ankehitriny, ny algorithm amin'ny fikarohana dia manaiky ny votoatin'ny kalitaon'ny fankasitrahana ny fanandraman'ny mpampiasa kokoa amin'ny rafitra ara-teknika rehetra. Noho izany, mety ho adinonao ny adihevitra maoderina indray mandeha ho azy sy ho an'ny rehetra.
Mahaiza mifantoka amin'ny zavatra ilain'ny mpanjifanao
Aza mifantoka amin'ny ezaka rehetra ataonao amin'ny lafiny teknika SEO rehetra, farafaharatsiny miasa amin'ny votoatiny. Tsarovy fotsiny - ianao mamorona votoaty tsara ho an'ny tena mpamaky, fa tsy ny milina. Midika eto aho fa ny ampahany tsirairay amin'ny asa soratranao dia natao hanompoana ny mpihaino anao. Ary raha tsy azonao alaina sary an-tsaina ny mety ho an'ny mpanjifanao manao ny fikarohana ireo teny fanalahidinao, dia aleo mieritreritra ny hahazo vaovao. Mifantoka fotsiny amin'ny famoronana votoaty tsara, satria amin'izao fotoana izao dia afaka omena laharam-pahamehana ambony ianao, tsy mifanaraka amin'ny teny fanalahidy.
Hamafiso ny lisitra misy anao amin'izao fotoana izao
Ity dia iray amin'ireo toro-hevitra lehibe indrindra momba ny SEO SEO ho an'ny androany. Ny zavatra dia ny ankamaroantsika dia mihevi-tena be loatra mba hikaroka loatra, mba hahafahanao mamerina mamerina indray ny adiresy misy anao amin'izao fotoana izao. Mialà fotsiny ireo teny izay tsy mahazatra intsony ny fampiasana matetika. Raha tsy mahatsapa ianao hoe inona no tokony hesorina, manoro hevitra aho amin'ny fampiasana fitaovana iray misokatra ho an'ny fanombanana ny teny fanalahidy aminao quantitatively. Raha ny amiko kosa, hitako ny Keyword Planer an'ny Google izay tena tiako indrindra. Fa ny fisafidianana ny fitaovana tsara dia anao ihany. Raha ny marina, ny ankamaroan'izy ireo dia miasa toy izany.